> Resource > Free > Top 5 Best Video Editors FLV Free
Video edition loo baahan yahay in files FLV aad waxa aad jeclaan lahayd in ay noqdaan. Warka fiicani waxa weeye in ay jiraan tiro ka mid ah, kuwaas oo tafatirayaasha in aad ka heli karto lacag la'aan. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah shanta tifaftirayaasha FLV diyaar u ah isticmaalka. Midka aad doorato wuxuu ku xirnaan doonaa nooca tafatirka aad maskaxda ku hayso.
Kasta Video Converter
Movica waa editor ah graphic ama filim for Windows (.wmv) Media, files MPEG iyo filimada FLV leh awood ay ku doortaan ama tirtirto qaybo badan oo ka file video ah. Waxaa isticmaala inay COP, koollada, ku biiro, kala oo hufay videos ee awood u. Aad fudud oo degdeg badan si ay u isticmaalaan.
Awood aad si loo badbaadiyo qeybo ka mid ah video ah oo kala qaybsan tahay in la saxar ah.
Qaar ka mid ah farriimaha xaaladda noqon kartaa mid adag in la fahmo,
Ma taageeri computer 64-bit.
Freeware Tani waa miisaanka yar oo user-friendly. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud aad xaalkaa video files si fudud iyadoo la tirtiro off qaybaha aan la rabin. Sida arrin xaqiiqada, waxa ay taageertaa tiro ka mid ah qaabab video. Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan geeddi-socodka waa in Free Video Dub ma u baahan tahay in dib-u-encode wax, kaas oo xajiya, oo tayo leh asalka ah ee aad video.
Interface Multi-luqadood taasoo u fududaynaysa in la isticmaalo;
Dhowr qaabab video taageeray.
Adag tahay in aad ku darto saamaynta muuqaal laga yaabaa.
Video qalabeed Waa wax ku ool ah oo user-friendly online editor video kuu ogolaanaya inaad si ay u dhinto, dalagga, darsamaan, eegis iyo ciyaaro video ah. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, Mpg, dhexena, VOB, wmv iyo in ka badan. Waxaa sidoo kale Manager ah Advanced File taasoo u fududaynaysa in aad geliyaan videos download iyo files ka goobood oo kale oo ku saabsan internetka.
Taageerada qaabab video kala duwan;
Fursadaha video tafatirka kala duwan.
Cidhiidhyo tirada file aad u 600MB .
Tani ma aha oo kaliya Converter laakiin ciyaaryahan oo editor sidoo. Waxa aad bixisaa hab si loogu badalo files qaababka ku habboon loo yaqaan SliTaz, inay webka iyo sidoo kale loogu isticmaalo Qalabka telefoonada gacanta. Qalabka lagama maarmaanka u ah tafatirka waa fudud loo heli karo oo ma aha inaad in ay dhex maraan hab kale download si aan u helno.
Taageerada badan oo qaabab video;
Easy in ay isticmaalaan interface.
Ma badalo karaa files audio.
Waxaad samayn kartaa dhowr hawlaha video edit barnaamijka this video tafatir oo lacag la'aan ah. Kuwaas waxaa ka mid watermark, goo, dalagga, ku milmaan iyo sidoo kale saamaynta gaar ah. Waxaad faa'iido u badan qaabab wax soo saarka iyo taasi ka dhigan tahay in aad edition, aadan u leeyihiin in ay soo afjaraan la files FLV kaliya. Run ahaantii, waxa uu leeyahay tiro badan fursadaha edit file video aad u qancisid baahidaada.
Khayraadka Computer (processor iyo RAM) waxaa looga baahan yahay si heer sare.
Haddii aad u baahan tahay xirfad dheeraad ah MP4 video joiner ah, Wondershare Video Editor si weyn lagu talinayaa. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan oo ay ku jiraan qaabab video MP4, FLV, MOV, AVI, wmv iyo in ka badan. Sidaa daraadeed, ma aha oo kaliya in aad ku biiri kartaa oo kala duwan videos wada, laakiin sidoo kale ku dar kala guurka iyo Dhibaatooyinka kale ee sida aad jeceshahay.
Easy in ay isticmaalaan, laakiin gabi ahaanba free video Converter oo awood aad u ciyaaro qaab sax ah oo ku saabsan computer iyo qalab.
10 Goobaha for Free Album Downloads
Top 5 Converter mkv free
Top 3 Daawadayaasha Free Photo for Windows